MACLUUMAADKA ISKU-DHAFAN EE WOLF DOG IYO SAWIRADA - EEYAHA
Macluumaadka Isku-dhafan ee Wolf Dog iyo Sawirada
Wolf / Guriga eyga iskutallaabtiisa
Jinni waa Siberian Husky / Wolf isku darka halkan ka muuqda 2 sano jir
Iskudhafka 'Wolf Hybrid' wuxuu noqon karaa mid farshaxan ah oo si fiican ugama jawaabi karo walxaha aan nooleyn, dhaqdhaqaaqa degdega ah, sawaxanka sare ama dadka cusub. Waxay u baahan tahay dulqaad badan. Tababarku maaha mid daciif ah oo tixgelin dhab ah waa in la siiyaa ka hor inta aan la helin Wolf Hybrid, maadaama ay u baahan tahay tababar adag, joogto ah iyo meel ku filan oo lagu meeraysto. Haddii ay jiraan wax aad ka aragto xumaan iyo aflagaaddo waxaad ku sharxi kartaa yeydo inay si farxad leh u rogrogmi doonto oo ay lafteeda gashan doonto baashaalka! Ma ahan illaa iyo inta ay 'Wolf Hybrid' qiyaastii tahay 18 bilood jir in ay bilaabi doonto inay muujiso astaamo yeey. Yeyda ka yar da'da 18 bilood waa dhalinyaro waa ciyaaraan waana la qabsan karaa. Waxay u qaataan jihooyinka si fudud waxayna kuxiran karaan noocyada kale. Yeyda yaryari waxay u dhaqmaan sida eyga caadiga ah maadaama aysan u bislaanin qaan gaar. Markay yeeydu ka soo baxdo qaan-gaarnimadeeda, nidaamkeeda hoormoonku wuxuu gaaraa qaan gaar wuxuuna bilaabi doonaa inuu soo bandhigo dhammaan dabeecadaha caadiga ah ee yeyda.
Laga bilaabo ilaa 1990 ereyga saxda ah ee isku darka yeeyda iyo eeyga gudaha waa 'yeolfdog.' Eyga waxaa loo qoondeeyey inuu yahay nooc ka mid ah yeeyda (canis lupus familiaris) sidaa darteedna, macquul ma ahan in la helo iskudhaf maadama ay yihiin labo nooc oo isku mid ah. In kasta oo farsamo ahaan khaldan tahay, haddana ereyga 'isku-jir' weli dad badan ayaa adeegsada, gaar ahaan markay tahay isku-darka laba eeyo-guriyeed saafi ah.
Waxaa na soo gaadhsiiyey qaar ka mid ah fannaaniinta wolfdog ee jecel inay jiraan xoolo badan oo halkaas jooga oo la sheegay inay yihiin eyda, laakiin dhab ahaantii waa Eyga nordigga ah isku darka. Sida muuqata qaar ayaa lagu sawiray gudaha qaybtaan. Waxaan go'aan ku gaarnay inaan ilaalino qaybtan isku-dirka yeyda iyadoo la barbar dhigayo eeyaha la caddeeyay inay yihiin wolfdogs run ah . Waxaad ka arki kartaa tusaalooyinka qaarkood Aan-Wolfdogs: Aqoonsiga Khaldan .
Xarunta Macluumaadka Eyga ee 'Dog Breed Info Center®' ma sheeganayso eeyaha qaybtani inaysan ahayn yey dhab ah. Waxaan jeclaan lahayn inaad sameyso isbarbardhiggaaga u dhexeeya qaybtan isku-dirka yeyda iyo tan la caddeeyey qaybta wolfdog . Waxaa jira eeyo badan oo ku jira hoyga la dilo maxaa yeelay waxay u egyihiin yeey marka ay dhab ahaan yihiin eey u eg Nordic, sida isku darka Husky ama Malamute. Been ku calaamaynta xoolaha sida eyda hoyga ayaa noqon kara waxyeello. Eeyaha Waqooyiga Yurub ayaa la dilayaa oo yeydu uma socdaan samatabbixinta saxda ah ee ay jiraan dad yaqaan sida loola macaamilo.
sida loo daryeelo eey 3 toddobaad jir ah
Iskudhafka Wolf ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab u dhexeysa eyga iyo yey. Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aamiyo dabeecadda noocyada isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Qof kasta oo leh Wolf Hybrid waa inuu akhriyaa labadan bog: Eyga Sare iyo Dejinta iyo Haysashada Jagada Alpha, oo WAA INAAD fahanto cilmu-nafsiga eey / yeey oo aad diyaar u tahay inaad raacdo. Isku-dhafkan laguma talinayo dadka badankood.
Markii ugu horreysay waxaan la kulmay Charlie, Siberia Husky / Timber Wolf oo isku dar ah hoy aan hoy lahayn oo loogu talagalay dhalinyarada. Charlie wuxuu u baahday guri lagu koriyo si milkiilashiisu diirada u saaro sidii noloshiisa toosan loogu heli lahaa (milkiilihiisii ​​tan iyo markii uu la midoobay qoyskiisa aadanaha). Charlie wuxuu ku dhashay Alaska waxaana la keenay koonfur-galbeed. Lugahiisa ayaa si aad ah ugu nugul kuleylka. Markii ugu horraysay ee aan la kulmo wuxuu ahaa 4 jir lab ah oo leh astaamaha yeyda ee xishoodka dadka shisheeyaha ah wuxuuna lahaa dabeecad aan dabiicad lahayn oo xagga dadka ah. Wuxuu leeyahay jirka lugta leh ee caadiga ah, jaakad laba jibbaaran oo si joogto ah u daadisa, iyo dhogor dhumuc ah garbaha iyo lugaha dambe oo noqda mid aad loo buunbuuniyo markii la dhibayo. Wuxuu leeyahay mid isha buluug ah taasi waxay ka caawineysaa inuu muujiyo dabeecadiisa jireed ee Siberia Husky. Cagihiisa webbarka waxay siinayaan kacsanaan uu ku muujiyo eeydayda kale markaan u soo qaado woqooyiga si uu ugu ciyaaro barafka-wuxuu umuuqdaa inuu ku ordayo barafka dushiisa (oo wuxuu jecel yahay inuu sameeyo malaa'igo baraf ah) halka inta hartayna ay tahay inay ku dhex socdaan waa
Waxaan ka walwalsanaa inuu noqdo mid aan la maarayn karin iyadoo ku saleysan wixii aan ka ogaa ee yeyda-isku dhafka ah laakiin waxaan ogolaaday inaan koriyo (waxaan hayaa eeyo iyo bisado kale). Ma uusan jeclayn isku darka iyo la ciyaarida dadka bilooyinkiisa ugu horeeya kaliya wuxuu daneynayaa eeyadayada kale. Waxay qaadatay hal sano oo isbarasho ah xirmadiisa cusub waana hubaal inuu yahay eeyga alfa. Wuxuu ku saxaroodaa meel kasta oo ka mid ah daaradda (sida eydayada kale ee ganacsigooda ku koobaya hal meel) wuxuuna calaamadeeyaa dhammaan dhulka uu awoodo inta uu socdo (oo ay tahay inuu dhaco 1 ama 2 jeer maalintii ama uu noqdo mid aan xasilloonayn oo xawaare ku socda oo samayn doona) qaylo aamusnaan). Wuxuu sidoo kale aad u leeyahay mid ka mid ah eeyaha dumarka ah ee gurigayga ku jira ee uu u arko inuu yahay alfa-saaxiibkiis isla markaana uu dhex dhigi doono eey kasta oo kale iyo 'saaxiibkiis.' Ma qayliyo (sida baakadkayaga kale u qayliyaan) laakiin wuxuu sameyn doonaa dhawaaq aamusnaan-hees ah oohin markuu doonayo feejignaan.
sheybaarka lagu qaso eyga wiener
'Uma doonayo inuu kasbado ammaantayada ama sida tababarka eeyada kale waxaanan u adeegsadaa hab ku dhow Cesar eeyga Whisperer si aan ula shaqeeyo, isaga oo ku maareeya aamusnaan, cod aamusnaan leh iyo luuqadeyda u gaarka ah oo u muuqata inay shaqeyneyso ugu fiican isaga. Amarada dheer ama codsiyada khiyaanooyinka waxtar ma leh. In kasta oo isagu yahay al-eyga halkan, haddana wuu iska bixin doonaa wixii buuq ama sawaxan leh oo naftiisa ka dhigaa mid yar. Isaguna godad ayuu qodin doonaa, laakiin tani waxay ahayd dabeecaddiisa kaliya ee wax halaagga ah ee aan soo aragnay.
Caqabadayada ugu weyn ee isku dhafkan isku dhafan waa cunidiisa. Haddii aan si jimicsi leh loo jimicsanin wuu diidi doonaa cuntada, iyo inta uu u qaadan doono kibble qalalan daawo ahaan, wuxuu lumin doonaa xiisaha uu u qabo cunnadiisa iyo hilib kala duwan ayaa lagu beddelayaa cuntooyinkiisa si ay u sii wadato rabitaankiisa.
Waxaan kasbaday kalsoonida Charlie, daacadnimadiisa iyo ku tiirsanaantiisa. Laakiin marwalba waxaan si firfircoon u hubiyaa in yeeyda isaga ku jirta ay sii qarsoon tahay halkii aan yeyga u oggolaan lahaa inuu xor noqdo.
'Tani waa Dakota. S waa a Xarago / Isku-darka Gray Wolf ee halkan lagu muujiyey isagoo jira 3 sano. Waxay jeceshahay dadka, haddana aad ayey u ilaalisaa qoyskeeda. Wuxuu jecel yahay inuu ku socdo raacid dheer wuxuuna ku socdaa buuraha. Isku-dhafkan ayaa ah GUUD oo si khaldan loo fahmay! '
'Fang White' waa Arctic Wolf / Siberian Husky isku dhafan. Waa ninka ugu macaan ee abid aad qiyaasi karto. Gabadhayda (oo ah 8 jir) waxay jeceshahay inay u isticmaasho barkin waxayna u muuqataa inay dhab ahaan ka jeceshahay inay ku sii dhawaato.
'White Fang hadda waa 2 sano jir waana saaxiibka ugu fiican 9-bilood jir Siberian Husky Shiann. Labaduba ma kala noqon karaan midba midka kale muddo dheer.
'White Fang, waxaan aaminsanahay, inuu u dhaqmo sida Husky oo kale. Waxaan leenahay xayndaab gaar ah oo 6-dhudhun ah iyo irrid. Taasi kama horjoogsanayso isaga, in kasta oo uu socod ku dhex marayo xaafadda. Haddii uu doonayo dibedda wuxuu helaa waddo looga baxo. Marka, waxaan hadda qaadnay inaan kala soo baxno kuraasta cawska oo aan ku nasano banaanka halka ay isaga iyo saaxiibkiis Shiann banaanka ku ciyaarayaan.
Jarmalka adhijir belgian malinois iskudhafka
'Waqtiga ugu fiican ee loo yaqaan' White Fang 'waa sanadka jiilaalka. Maadaama barafku ka da'o halka aan ku nool nahay, way adag tahay in la helo isaga inuu doonayo inuu ku soo laabto gudaha ka dib markii uu ku ciyaarayay barafka. Waxaan ugu yeeraa eeyga barafka ugu dambeeya. Koodhkiisu waa mid aad u qaro weyn oo cufan. Lugahiisu waxay u shaqeeyaan sidii barafka barafka oo wuxuu leeyahay ciddiyo dhaadheer oo uu u adeegsado inuu isku qodo god uu ku jiifo marka uu doonayo nasasho ka cayrsashada Shiann barafka.
'Mid ka mid ah waxyaabaha aan ka ogaaday White Fang waa in xilliga qaboobaha dhiniciisa yeyda u muuqato inay rabto inay soo baxdo. Waqtigiisa oo dhan wuxuu ku qaataa banaanka wax yarna nagama siiyo, laakiin haddii uu Husky naga maqan yahay oo aan iyada ugu yeerno, waa laga yaabaa inuu raaco. Waxaan ku leenahay albaab eey ah albaabkeena dambe oo u baxa dibadda. Oo tan iyo inta lagu jiro xilliga qaboobaha White Fang wuu ku qanacsan yahay joogitaanka daaradda iyo ku ciyaarista barafka, waxaan ka tagnaa albaabka si uu isagu naftiisa u nafisiyo saqda dhexe haddii loo baahdo. Habeen ka mid ah White Fang ayaa banaanka u soo baxay wuxuuna helay daloolkiisa hunguriga badan wuxuuna go aansaday inuu doonayo inuu seexdo halkaas, waxa xigay ee aan ogahay inaan maqlay (waxa aan u maleeyay) ayaa ah yeey baroor. Hagaag, hada waa inaan kuu sheegaa inaan ku nool nahay Indiana gebi ahaanba ma hubo, laakiin uma maleynayo inay jiraan yeey duurjoog ah oo halkan ka baxsan. Sikastaba, ninkayga iyo aniga waxaan u kacnay inaan hubino in eeyadu ay gudaha kujiraan ka hor intaanan xirin albaabka eyga, kaliya waxaan ogaanay inay tahay oohinta Cad Fanka ee dayaxa. Baahnayn in la sheego, wuu diiday inuu soo galo oo waxaan lahaanay deris yar oo xanaaqsan maalinta ku xigta.
'Fang White' waa eey qurux badan. Isagu wuu jecel yahay mana muujin wax gardarro ah haba yaraatee. In kastoo, waan hubaa inuu jeclaan lahaa inuu bisadda u adeegsado cunnooyin lagu calaliyo mararka qaarkood. Wuxuu guud ahaan u ogolaadaa bisadda inuu isagu ciyaaro mooyee ka dibna wuu 'dabagalaa' bisadda. '
'Kani waa Miya, eeyaha yar ee eyda ah. Waxaa ii sheegay ninka soosaara inuu aabaheed yahay Wolf alwaax hooyadeedna waa badh Gray Wolf iyo badh Malamute . Waxay tahay 9 toddobaad jir sawirkan waxayna ku saabsan tahay 20 lbs. Iyadu waa qof saaxiibtinimo badan oo xoogaa xishood badan. Way oydaa wax badan, gaar ahaan markaan gudaha ku jirno oo ay banaanka la joogto kuwayaga Siberia Husky . '
'Kani waa Kringle iyo Powder. Iyagu waa yeey 3 jir ah / Iskudhisyo yaryar. Waxay ku saabsan yihiin 80% yeey iyo 20% Siberia Husky . '
Isugey Yey ah oo 4-bilood jir ah oo lagu magacaabo Tukai waa 25% Siberia Husky iyo 75% Timber Wolf.
'Raven waa yey jir ah oo toban bilood jir ah. Iyadu waa weyn Malamute / Timber Wolf / British Columbian Wolf / Mackenzie Valley Wolf iskutallaabta. Iyadu waa qof aad u jecel, oo aan ka baqayn waxna jecel carruurtayda 7 iyo 10-ka sano. Waxaan qabay tan iyo markii ay ahayd 4 toddobaad. Iyadu waa qof caqli badan, weydiin badan oo madax adag. Iyadu waa dhadig alfa ah oo jecel inay aragto waxa ay ku badbaadi karto oo keliya. Waxay ku ciyaareysaa si qallafsan, laakiin iyadu sidoo kale way ogtahay sharciyada. Way fududahay in la tababaro. Iyadu waa saaxiibtinimo oo waxay jeceshahay dadka badankeeda dhinaca kale iyadu way ilaalisaa, markayna jeclayn qofna way ku qaylin doontaa / ku ooyi doontaa iyaga. Waa gabar weyn oo laga filayo inay hesho ilaa 130 rodol. oo noqo 32 garabka garabka. Hada waxay joogtaa 10 bilood dhererkeeduna waa 29 inji waana 90 rodol. Iyadu waa farxad inay haysato qayb ka mid ah qoyskeenna, waxayna leedahay dareen kaftan ah oo ka baxsan adduunkan. Iyadu waa cajiib !!
'Waxaan hayaa isku-darka 50/50 Siberia Husky / Timber Wolf oo ah mid cajiib ah. Magaciisu waa Kyzer waana 9 bilood jir. In kasta oo uu tartan fiican ii ahaa, haddana si fiican ayuu u tababaranayaa. Waa nin caqli badan. Nasiib badan ayaan la yeeshay Hogaamiyaha Jilicsan. Isaga wuxuu si fiican iigu dhagaystaa socodka mana jiido. Way fiicantahay.
Eeg tusaalooyin badan oo ka mid ah Wolf Hybrid
Sawirada Wolf Hybrid 1
Wolf Hybrid Sawirada 2
ceel dibi chow chow mix
maxey eyda qaar sanka casaanka u leeyihiin
boston terrier japan isku dhafka garka
pitbull jack russell terrier iskudhaf
brittany spaniel beagle mix dhallaanka